Farriinta Safiirka - Embassy of The Federal Republic of Somalia
Si diirran ayay dhammaantiin idiin soo dhaweyneysaa Safaaradda Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya.
Soomaaliya oo ku taal Geeska Afrika, kuna fidsan Badweynta Hindiya iyo Badda Cas waxay hadda ka soo kabsaneysaa xasilooni darro sokeeye oo raagtay. Dalku wuxuu ku socday jidkii dib u soo kabashada 20-kii sano ee ugu dambeeyay, wuxuuna dhowr qeybood ka sameeyay horumarro la taaban karo, kuwaas oo ay ka mid yihiin, waxbarashada, caafimaadka, iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay. Kheyraadkeeda dabiigica ah ee muhiimka ah, kaas oo aan weli si buuxda looga faa’iideysan wuxuu muujinayaa fursado waaweyn oo la xiriira horumarka mustaqbalka. Wakhtigan la joogo waxaa dib loo soo nooleeyay qeybo ka mid ah wax soo saarka, sida beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga. Hay’ado badan, Mareykanka iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeyay taariikh dheer oo dhinaca wax wada qabsiga ah.
Safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa dib loo furay 18-kii November 2015, iyadoo dib u soo nooleysay wada shaqeyntii wanaagsaneyd iyo iskaashigii ay goonida u lahaayeen Soomaaliya iyo Mareykanka tan iyo markii ugu horeysay ee la aas-aasay safaaradda bishii July 1, 1960. Safaaraddu waxay hadda ku dakeyneysaa 60-sanadood oo xiriir diblomaasiyadeed uu mareykanka kala dhexeeyay, kaas oo ku saleysan mabaa’diida is ixtiraamka iyo sinnaanta ee ka dhexeeya labada dal. Xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labadan dal ee walaaltinimada leh ayaa kobiciisu sii soconayay ilaa wakhigaas.
Farxad weyn ayay safaaradda u aheyd iskashiga ay la leedahay Mareykanka. Mareykanku wuxuu ka mid yahay dalalka fara ku tiriska ah ee caalamka oo tilmaan gaar ahaaneed oo kasta ay mudan tahay mahadnaq, laga soo billaabo taariikhdiisa iyo cimiladiisa ilaa iyo qaab dhismeedka, dhaqanka iyo caadooyinkiisa. Mareykanku wuxuu leeyahay goobo qurux badan oo la booqdo, quruxdeeda dabiiciga ahna waa mid aan wax lala simo aysan jirin.
Si buuxda ayay hadda u shaqeysaa tan iyo intii dib loo aas-aasay, safaaradduna waxay ku howlan tahay inay siiso muwaadiniita Soomaaliyeed iyo kuwa mustaqbalka la filayo inay Soomaaliya booqdaan adeegyada ugu badan oo ay u baahan yihiin. Adeeggan wuxuu kaliya sii xoojiynayaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya. Shaqada safaaraddu waa isku xir muhiim ah oo u dhexeeya dowladaha iyo dadka labadaas dal, waxayna gacan ka geysataa fududeynta safarka lagu aado ama looga yimaado Soomaaliya, isla markaana siisaa macluumaad dadka doonaya inay soo booqdaan Soomaaliya, iyo iyadoo u oggolaaneysa dadka ajaanibta ah ee u booqanaya Soomaaliya inay fahmaan dadka iyo dhaqanka inta ay isku diyaarinayaan booqashadooda.
Safaaraddu waxay sido kale ku faaneysaa gacansiinta qurbajoogta Soomaaliyeed ee doonaya inay dib ugu xirmaan dalkoodii hooyo, si ay uga hirgaliyaan gacansi iyo fursado aqoon sare ah, gaar ahaan qeybta qunsuliyadda ee safaaradda waa mee laga heli karo xog muhiim ah oo loogu talagalay qurbajoogta dooneysa macluumaadkii ugu dambeeyay iyo waxyaabihii soo kordhay dhawaanahaan. Safaaraddu sidoo kale waxay aragti ka siin kartaa shakhsiyaadka qurbajoogta ah ee laga yaabo inaysan helin dhawaanahaan fursado ay Soomaaliya ku booqdaan.
Safaarad ahaan, shaqada aan heyno waxay kaliya sii socodsiin doontaa xoojinta saaxiibtinimada fog ee ka dhexeysa labadeenna dal. Waa rajadayada ugu weyn in safaaraddu sii waddo xiriirkan, iyo inay sii xoojiso isku xirnaanshaha ka dhexeeya labadeena dal, kaas oo kobcinaya xiriirka laba geedka ah, si aan uga qeybqaadano nabadda iyo horumarka dunida.
Waad ku mahadsantihiin daneyntiinna safaaradda Soomaaliya iyo xiriirka joogtada ah ee koraya ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya. Waxaan rajeyneynayaa in khibradda aad ka hesheen safaaradda in ay tahay xog aad u qiimo badan.
Danjire Ali Sharif Ahmed
Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka